सधैँ अनिश्चित काठमाडौंका मतदाता किन? | KTM Khabar
सधैँ अनिश्चित काठमाडौंका मतदाता किन?
२०७४ कार्त्तिक २६ गते १०:०९ मा प्रकाशित
गाउँका मतदाता र सहरी मतदाताको मनोविज्ञान अलग हुन्छ । उनीहरू प्रभावित बन्ने मानक बिल्कुल भिन्न हुन्छ । गाउँका मतदाता नातागोता र इष्टमित्र जस्ता सामाजिक जालोभित्र रहन्छन् । त्यसैले उनीहरूको मत सधैं स्थिर हुन्छ । तर, सहरका मतादाता त्यस्ता सामाजिक जालोभित्र रहेका हुँदैनन् । त्यसैले सहरका मत सधैं अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्ता मत क्षणिक लहडको भरमा जता पनि बहन सक्छ । लौहपुरुषका रूपमा परिचित गणेशमान सिंहले सायद सहरको यो मनोविज्ञान बुझेका थिए । उनी आफ्ना मतदाताप्रति विश्वस्त थिएनन् । त्यसैले उनी निर्वाचन अवधिभर आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा बस्न छाडेर काभ्रेको बनेपा गएर बसेका थिए । ०४६ सालपछिका निर्वाचनमा यो अवस्था अझ झाँगिएर गएको देखिन्छ । यो खबर समाजशास्त्री शुरेश ढकालको भनाई उद्धृत गर्दै आजको राजधानीमा छापिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई यही काठमाडौंले हरायो । उनको ठाउँमा युवा नेता मदन भण्डारी चुनाव जितेर स्थापित भए । लोकतन्त्र स्थापनालगत्तै ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीलाई काठमाडौंले अप्रत्यासित रूपमा विजय गरायो । स्थापित राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले हार ब्यहोर्नु पर्‍यो । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन राप्रपा नेपाल काठमाडौंकै मतका कारण स्थापित भयो । केही समयअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवस्था अझ रोचक देखियो । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार विवेकशील पार्टीकी रञ्जु दर्शनाले अप्रत्याशित मत ल्याउनु यसैको कारण हो ।
नानीमैया दाहाल : २०३८
काठमाडौंका मतदाताको मनोविज्ञान बयान गर्ने सबैभन्दा पुरानो, तर सटिक उदाहरण हो आमनिर्वाचन–२०३८ । पञ्चायतका धुरन्धर जोगमेहर श्रेष्ठले २९ हजार मत ल्याउँदा त्यसअगाडि नामै नसुनिएकी नानीमैया दाहालले ६५ हजार ७ सय मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् । राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनका लागि काठमाडौंबाट सर्वाधिक मत ल्याउने दुईजना निर्वाचित हुने व्यवस्थाअनुसार जोगमेहर पनि रापंस भए । र, पछिसम्म राजनीतिमा रहे । तर, देशको राजधानीकी सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृ कुन गल्लीबाट आएकी थिइन् र कथा हराइन् कसैलाई पत्तो छैन ।
०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट दुईतिहाइ मत ल्याएर प्रधानमन्त्री भएका बिपी कोइरालालाई गिरफ्तार गरेर जेल हाल्ने राजालाई समर्थन गर्दै सातपटक मन्त्री, दुईपटक उपप्रधानमन्त्री, दुईपटक प्रधानमन्त्री र राजाको मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्षसमेत भएका कीर्तिनिधि विष्टले दुईपटक मात्र निर्वाचनमा उठ्ने कोसिस गरे । ०५१ को निर्वाचनमा काठमाडौं ३ मा उम्मेदवार बनेका उनले ११८० मत ल्याए । ०५६ मा फेरि प्रयास गर्दा उनको मत ३६५ मा सीमित रह्यो । तैपनि राजाले सत्ता हातमा लिएपछि उनी शक्तिमा आए ।
सशस्त्र द्वन्द्वलगत्तै ०६४ सालमा भएको निर्वाचनमा एमालेका शक्तिशाली महासचिव माधवकुमार नेपालले काठमाडौं २ बाट अनपेक्षित हार सामना गर्नुपर्‍यो । रोल्पा जिविसका पूर्वसभापति झक्कु सुवेदीले अचानक काठमाडौंबाट जितेर सनसनी मच्चाए । सो निर्वाचनमा एमाले उपत्यकाका १५ वटै सिटमा पराजित भयो । झक्कु यसपालि काठमाडौं ६ बाट उम्मेदवार छन् र माधव नेपाललाई काठमाडौं २ मा माओवादीको साथ छ ।
०६४ को निर्वाचनमा २३ हजार २७७ मत ल्याएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विजयी हुँदा काठमाडौं १० मा उनका प्रतिस्पर्धी राजेन्द्र केसीले १२ हजार १५४ मत ल्याएका थिए । तर, ०७० को निर्वाचनमा प्रचण्डले १२ हजार ८५९ मत ल्याउँदा कांग्रेसका राजेन्द्रले २९ हजार ३९२ मत ल्याए । ०६४ को निर्वाचनमा काठमाडौंका चार निर्वाचन क्षेत्र जितेको माओवादीले ०७० मा शून्य सिटमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।
२० वर्षपछि आह्वान भएको गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंको मेयरका लागि राष्ट्रिय दल र राष्ट्रिय व्यक्तित्वबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तर, योबीचमा २१ वर्षकी युवती रञ्जु दर्शनाले २३ हजार मत ल्याएर सबैलाई चकित बनाइन् । उनले निर्वाचित विद्यासुन्दर शाक्यको तुलनामा एकतिहाइ मात्र ल्याएकी हुन् । तर, माओवादी उम्मेदवारले जमानत पनि जोगाउन नसकेको यो निर्वाचनमा अर्का चर्चित उम्मेदवार तथा पूर्वसचिव किशोर थापाले भन्दा पनि रञ्जुले धेरै मत ल्याएकाले उनको चर्चा धेरै भयो ।